Wednesday . 27 May . 2020
အိမ်သာထဲ ဖုန်းသုံးခြင်းကြောင့် လူတိုင်းကို မပြောရဲ၊ ဆေးခန်းတောင် ပြရမှာရှက်စရာ ကောင်းတဲ့ ရောဂါဖြစ်နိုင်
“အဖြစ်ချင်ဆုံး ရောဂါနဲ့ မဖြစ်ချင်ဆုံး ရောဂါကို ပြောစမ်း”ဆိုတဲ့ လူရွှင်တော်တွေ နောက်ပြောင်လေ့ရှိတဲ့ ပြက်လုံးလေးက အတော်လေး ရယ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ပြန်ဖြေတဲ့ လူရွှင်တော်က ” အဖြစ်ချင်ဆုံးရောဂါက ဝဲရောဂါပဲကွ … ယားလိုက်၊ ကုတ်လိုက်၊ ဇိမ်ခံလိုက် “ဆိုပြီး ဖြေပါတယ်။
မဖြစ်ချင်ဆုံးရောဂါအတွက် “မဖြစ်ချင်ဆုံး ရောဂါကတော့ လိပ်ခေါင်းရောဂါပဲ .. သူများလည်း မပြချင်ဘူး .. ကိုယ်တိုင်လည်း မကြည့်ချင်ဘူး “လို့ ဖြေပါသတဲ့။ အခုလည်း အိမ်သာထဲမှာ ဖုန်းယူသွားလေ့ရှိတဲ့ ကိုကိုမမတွေ အထူးသတိထားရမယ့် အရာလေးကတော့ ရှိနေပါတယ်။
အဲဒါကတော့ ဖုန်းနဲ့မှ အိမ်သာတက်ချင်သူတွေအနေနဲ့ မဖြစ်ချင်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်ရဖို့ရှိတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက သတိပေးလိုက်တာပါ။ အိမ်သာထဲမှာထိုင်ပြီး ဖုန်းကြာရှည်သုံးတဲ့အကျင့်က လိပ်ခေါင်းရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်သလို၊ တစ်ခြား ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေလည်း စောင့်မျှော်နေပါသတဲ့။
(၅၇)%သော ဗြိတိန်တွေဟာ အိမ်သာတက်တိုင် ဖုန်းသုံးလေ့ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး၊ (၈)%ကတော့ “အမြဲတမ်း ဖုန်းသုံးလေ့ရှိတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။ လိပ်ခေါင်းရောဂါရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေကတော့- (၁)အိမ်သာတက်တိုင်း သွေးထွက်နာကျင်ခြင်း (၂) စအိုယားယံခြင်း၊ (၃) အိမ်သာက ထွက်လာတိုင်း အိမ်သာတက်ချင်သလိုလို ဖြစ်ခြင်း-
(၄) အတွင်းခံ၊ အိမ်သားသုံးတစ်ရှူးတွေမှာ စေးကပ်ကပ်အရည်တွေ ကပ်နေတတ်ခြင်း၊ (၅) စအိုဘေးမှ အကျိတ်အဖုများ ထွက်ခြင်း၊ (၆) စအိုတဝိုက်မှာ နာကျင်ခြင်း စတဲ့အချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဖုန်းသုံးရင်းအိမ်သာတက်သူများ ဒီလို လက္ခဏာတွေဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါတယ်။
အထက်ပါ လိပ်ခေါင်းစစ်တမ်းကိုတော့ YouGov ကနေ ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ဖုန်းပါမှ အိမ်သာတက်ရတာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ နောင်တစ်ချိန်မှာ အတော်လေး စိုးရိမ်စရာပါ။ ဒါပေမေယ့် လက်ရှိအချိန်ထိတော့ အိမ်သာ+ဖုန်းကြောင့် ဆက်စပ်တဲ့ လိပ်ခေါင်းရောဂါရယ်လို့ တိတိကျကျ စာရင်းမရှိသေးပါဘူး။
“အဖွဈခငျြဆုံး ရောဂါနဲ့ မဖွဈခငျြဆုံး ရောဂါကို ပွောစမျး”ဆိုတဲ့ လူရှငျတျောတှေ နောကျပွောငျလရှေိ့တဲ့ ပွကျလုံးလေးက အတျောလေး ရယျဖို့ ကောငျးပါတယျ။ ပွနျဖွတေဲ့ လူရှငျတျောက ” အဖွဈခငျြဆုံးရောဂါက ဝဲရောဂါပဲကှ … ယားလိုကျ၊ ကုတျလိုကျ၊ ဇိမျခံလိုကျ “ဆိုပွီး ဖွပေါတယျ။
မဖွဈခငျြဆုံးရောဂါအတှကျ “မဖွဈခငျြဆုံး ရောဂါကတော့ လိပျခေါငျးရောဂါပဲ .. သူမြားလညျး မပွခငျြဘူး .. ကိုယျတိုငျလညျး မကွညျ့ခငျြဘူး “လို့ ဖွပေါသတဲ့။ အခုလညျး အိမျသာထဲမှာ ဖုနျးယူသှားလရှေိ့တဲ့ ကိုကိုမမတှေ အထူးသတိထားရမယျ့ အရာလေးကတော့ ရှိနပေါတယျ။
အဲဒါကတော့ ဖုနျးနဲ့မှ အိမျသာတကျခငျြသူတှအေနနေဲ့ မဖွဈခငျြတဲ့ရောဂါ ဖွဈရဖို့ရှိတယျလို့ ပညာရှငျတှကေ သတိပေးလိုကျတာပါ။ အိမျသာထဲမှာထိုငျပွီး ဖုနျးကွာရှညျသုံးတဲ့အကငျြ့က လိပျခေါငျးရောဂါကို ဖွဈစနေိုငျသလို၊ တဈခွား ကနျြးမာရေးပွဿနာတှလေညျး စောငျ့မြှျောနပေါသတဲ့။
(၅၇)%သော ဗွိတိနျတှဟော အိမျသာတကျတိုငျ ဖုနျးသုံးလရှေိ့ကွောငျး ဝနျခံခဲ့ပွီး၊ (၈)%ကတော့ “အမွဲတမျး ဖုနျးသုံးလရှေိ့တယျ”လို့ ပွောပါတယျ။ လိပျခေါငျးရောဂါရဲ့ ရှပွေ့ေးလက်ခဏာတှကေတော့- (၁)အိမျသာတကျတိုငျး သှေးထှကျနာကငျြခွငျး (၂) စအိုယားယံခွငျး၊ (၃) အိမျသာက ထှကျလာတိုငျး အိမျသာတကျခငျြသလိုလို ဖွဈခွငျး-
(၄) အတှငျးခံ၊ အိမျသားသုံးတဈရှူးတှမှော စေးကပျကပျအရညျတှေ ကပျနတေတျခွငျး၊ (၅) စအိုဘေးမှ အကြိတျအဖုမြား ထှကျခွငျး၊ (၆) စအိုတဝိုကျမှာ နာကငျြခွငျး စတဲ့အခကျြတှေ ဖွဈပျေါတတျပါတယျ။ အကယျ၍ ဖုနျးသုံးရငျးအိမျသာတကျသူမြား ဒီလို လက်ခဏာတှဖွေဈလာရငျ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသငျ့ပါတယျ။
အထကျပါ လိပျခေါငျးစဈတမျးကိုတော့ YouGov ကနေ ကောကျယူခဲ့တာဖွဈပွီး၊ ဖုနျးပါမှ အိမျသာတကျရတာ အဓိပ်ပါယျရှိတယျဆိုတဲ့သူတှအေတှကျတော့ နောငျတဈခြိနျမှာ အတျောလေး စိုးရိမျစရာပါ။ ဒါပမေယျေ့ လကျရှိအခြိနျထိတော့ အိမျသာ+ဖုနျးကွောငျ့ ဆကျစပျတဲ့ လိပျခေါငျးရောဂါရယျလို့ တိတိကကြ စာရငျးမရှိသေးပါဘူး။